TwinGeo - Kujekesazve iyo Geo-Injiniya Concept -Y1E1
The chikuru nyaya edition ichi, kunenge anodudzira rokuti Geo-engineering, sezvo chakarondedzera kusanganisira ukoshi cheni kubva anokunda mashoko kusvikira startup ramambo womuenzaniso pakutanga conceptualized.
Imwe yenyaya huru inosanganisira maitiro muLand Administration, pakati payo iyo 2014 Cadastre yakaronga, ichitaura nezvezvakaitika nezvinetso zvisati zvambowanikwa mundima ino, vane mhando dzezvisikwa zvechokwadi dzinofanira kusanganiswa nemhando dzekushandurwa dzinokonzerwa munhu. Izvo zvakare zvinopa zvinoitika izvo Cadastre 2034 inoshuvira munzira yayo kumushandisi wekupedzisira ine basa rinoshanda mukugadzirisa pamwe nenzvimbo dhata dhata muhukama hwavo nekodzero, mabasa uye kurambidzwa kwerunyararo rwevanhu pasi pemaitiro erejista maitiro. uye kwete hukama hwepakati chete.
Nokudaro, neaya maviri nenyaya huru, nhanho shanu dzokushandisa dzinosanganiswa; vatatu vakatarisa kuenzanisira kwemashoko ekutanga uye maviri pamugumisiro wekugamuchira BIM kuvandudza nzira dzebhizimusi.
Plex.Earth apo Lambros inotitaurira pamusoro pevamwe vakavhenganiswa neCAD-GIS mhinduro kubva mukudiwa kweVijini Engineers,
e-Cassini, nheyo yayo, inotiratidza nzira yekuchengetedza kwemashoko kubva pane zvinyorwa zvepamusoro kune zvigoneki sechinhu chaicho chaicho Hub.
Mutungamiri weChassmtech anotsanangura kuti mamiriro ekugadzirwa kwemagetsi anobva mumifananidzo yeSatani anowana sei zvakanyatsoenderana neavo vakawana zvakananga.
Muchikamu chechinyorwa ichi, magazini yacho inosanganisira nhau kubva kumakambani anotungamira mumashandi; AutoDesk, Bentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, Hexagon uye Microsoft.
Tinokukoka iwe kuti unakidzwe nemapeji makumi matanhatu ekuverenga, nepo rinotevera shanduro riri kubika. Parizvino, iyo magazini inopihwa nedhijitari fomati, kuburikidza ne kudhinda uye kutumira kune zvinodiwa kana muchimiro chemuviri muzviitiko apo vatsigiri varo vanobatana.